YAA SAMEEYA KALIGII TALISKA (DICTATORSHIP) – Puntland News.net
Home 2016 April 14 Puntland News YAA SAMEEYA KALIGII TALISKA (DICTATORSHIP)
YAA SAMEEYA KALIGII TALISKA (DICTATORSHIP)
April 14, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
Sidaynu ogsoonahay diinteena Islaamka marka laga hadalayo nidaamka maamul waxa aynu ku shaqaynaa nidaamka wada tashiga (Shuuraa), sida ku cad nusuusta quraanka iyo axaadiistaba.
Haddaba, maxaa keenay inay u bataan hoggaamiyayaasha caalamul Islaam qaar kaligood iyo qoysaskoodaba ku kooban? Waxaan aaminsanahay, inay bulshada dhexdooda uun tahay kuwa sameeya ha u badnaadaan kuwooda aqoonta leh hadday tahay culimada diinta, maaddiga iyo bulshada inteeda kale.
Wakhtigii Cumar Ibnu Khadaab R.C uu amiirka ahaa, ayaa uu isagoo qudbadayna idhi “I maqloo i adeeca” nin ka mida ayaa istaagay oo ugu jawaabay “Ku maqli mayno oo ku adeeci mayno ilaa aad noo sheegto go’an labaad xaggaad ka keentay?” markaas ayuu Cumar wiilkiisii oo isna Saxaabi ahaa Ilaahay raali ha ka wada ahaadee uu ku idhi u sheeg xaggaan ka keenay. Wuxuun ugu jawaabay “Aabahay waa nin dheer oo go’i kaliya ayaa ku filaan waayay saan go’ aan anigu leeyahay ugu daray”. Tusaalahan waxaan u soo qaatay in ay muhiim tahay in lala xisaabtamo madaxda.
Haddaba su’aashu waxay tahay, madaxdeena malala xisaabtamaa? Hadday jawaabtu tahay maya, MIYAYNAAN INNAGU AHAYN KUWA SAMEEYA KALIGII TALISKA AMA DIGTAYTARKA? Ummaddu ama bulshadu waxay leedahay sharci iyo nidaam kala haga oo loogu tallo galay, in qofka madaxda ah iyo ka shacabka ahba uu wada qabto haddii uu sharcigaa jabiyana ciqaabta looga dhigay la mariyo, haddaba su’aasha iyana is waydiinta leh waxay tahay sharciga haddii uu jabiyo ninka madaxda ah ma qabtaa? Hadday jawaabtu tahay maya, MIYAYNAAN INNAGU AHAYN KUWA SAMEEYA KALIGII TALIYAHA AMA DIGTAYTARKA? Iyada oo ay sababtuna tahay ka hadal la’aanta sharciga uu jabiyey.
Qofka Bini-Aadamka ahi wuu khaldamaa madaxda ummadda hoggaaminaysaana waa Bini-Aadam, haddii loogu sacabtumo wax walba oo uu samaynayo oo aan loo sheegin inuu waxa uu ku khaldanyahay wuxuu isku qaadan uun inaanu khaladba ka dhicin ileen loomba sheeginee,haddaba su’aashu waxay tahay hoggaamiyaheena ma loo sheegaa khaladkiisa?
Haddii ay jawaabtu tahay mayee waa loo sacab tumaa, MIYAYNAAN INNAGU AHAYN KUWA SAMEEYA KALIGII TALISKA AMA DIGTAYTARKA? Ninka hoggaamiyaha ah marka loo dhiibo xilka ka bulsho ahaan, ma aaminsanahay in uu shaqaale innaga inoo shaqaynaya yahay? ileen waakan mushahar ka qaadanaya xoolaheenee, mise waxaynu aaminsanahay haddiiba uu madaxwayne yahay inuu isagu meesha iska leeyahay siduu doonana yeeli karo?
Haddii ay jawaabtu tahay ta danbe, MIYAYNAAN INNAGU AHAYN KUWA SAMEEYA KALIGII TALISKA AMA DIGTAYTARKA? Ugu danbayn, haddii uu hoggaamiyahu waayo la xisaabtan dhinac walba ah, haddii uu hoggaamiyuhu waayo cid saxda khaladkiisa, haddii uu hoggamiyuhu waayo cid sharciga marisa hadduu jabiyo, hadday bulshadu aaminto inaanu shaqaale u ahayn oo uu siduu doono yeeli karo, HOGGAAMIYAHEENU WAXA UU NOQON DOONAA UUN MID KALIGII TALIS AH.